လူ့သမိုင်းမှာ တန်ခိုးသြဇာ အကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် (သို့) တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဘာသာပြန်- Dr သန်းထွန်း) - News @ M-Media
in ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ / ဆောင်းပါး — October 20, 2014
B.A.(Hons:), M.A., Ph.D, D.Lit. (London)
အငြိမ်းစားပါမောက္ခ၊ သမိုင်းဌာန၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်။
ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ၊ သမိုင်းဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
Tags: ProphetMuhammad, မုဟမ္မဒ်